कोरोना संक्रमणबाट रुपन्देहीमा थप ४ जनाको निधन - आजकोNepal
कोरोना संक्रमणबाट रुपन्देहीमा थप ४ जनाको निधन
admin २५ असोज २०७७, 2:58 am
असोज २५ , बुटवल । कोरोना संक्रमणबाट आज रुपन्देहीमा थप चार जनाको निधन भएको छ । संक्रमित मध्ये बुटवल उप-महानगरपालिकाका ३ र तिलोतमा नगरपालिकाका एक जना रहेका छन् ।
बुटवल-११ कि ६१ वर्षीय महिलाको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारका क्रममा आइतबार बिहान २ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले जानकारी दिए । यस्तै सोहि स्थानका ८४ वर्षीय पुरुषको उपचारका लागि लैजाने क्रममा बाटोमा निधन भएको थियो । बुटवलमा आईसीयू बेड नभएपछि उनलाई दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना अस्पताल वा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुर लैजान रिफर गरिएकोमा बाटोमै आइतबार बिहान मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले जानकारी दिए । उनि दमको रोगि थिए ।
उच्च रक्तचाप र मधुमेहको दीर्घ रोगी ति महिलालाई आईसीयूको अभावमा अन्यत्रै रुपन्देहीबाट शुक्रबार राति साढे १० बजे दाङको बेलझुण्डी अस्पतालमा पुर्याइएको थियो । आईसीयूमा राखेर उपचार गर्ने क्रममा गए राति १० बजे उनको निधन भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिए ।
भागरथी हत्या प्रकरणका आरोपी पक्राउ
हातीडाडा गाउँ अब इनरव्हीलको संरक्षणमा
आर्ट अफ लिभिंगको प्यान ह्यापिनेस सम्पन्न
निर्वाचन आचारसंहिताबारे आयोगले आज दलहरुसंग छलफल गर्दै
भारतसँग ‘कम्फर्टेबल’ सम्बन्धबारे आफूले बोलेको कुरामा भइरहेको विवादबारे प्रचण्डले दिए…
देउवा: प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था आए पछि नहट्ने
सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच आजै दोस्रो चरणको…
प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक पेरिसडाँडामा सुरु
सरकार र विप्लव समूहबीच औपचारिक वार्ता सुरु
जनार्दन शर्माले पार्टीमा सचिवालय सदस्य रहेका बाहेक सबै सांसदलाई स्वतन्त्र…
काठमाडौं,फाल्गुन १९ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग ‘कम्फर्टेबल’ सम्बधबारे आफूले बोलेको कुरामा भइरहेको विवादबारे प्रस्टीकरण दिएका छन्। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार भएको…
सेयरबजारमा ३९.२३ अंकको गिरावट
काठमाडौं,फाल्गुन १९ । सेयरबजारमा ३९.२३ अंकको गिरावट आएको छ। बुधबार नेप्से उक्त अंकले घटेर २४ सय १६ विन्दुमा पुगेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार क…
काठमाडौं,फाल्गुन १९ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था आए पछि नहट्ने बताएका छन्। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले उक्त धारणा…
काठमाडौं,फाल्गुन १९ । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच आजै दोस्रो चरणको वार्ता हुने भएको छ। बुधबार विहान भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएपछि…
काठमाडौं,फाल्गुन १९ । प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाको स्थायी समिति बैठक सकिएर केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सुरु भएको छ। बिहान साढे ११ बजे सुरु भएको…